.:| Child Rights in Nepal | समाचारमा बालबालिका |:.
घरमा आगलागी हुँदा बालिकाको मृत्यु
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,१९ फागुन, तौलिहवा ।
विजयनगर गाँउपालिका –७ मानपुर डाँडाको एक घरमा आगलागी हुँदा बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय तीन वर्षीया राजकुमारी यादव छिन् । गर्मीयाम बढेसँगै चलेको हावाहुरीले घरमा आगलागी भएको बताइएको छ ।
६५ वर्षीय वृद्धद्वारा बालिका बलात्कृत
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१८ फागुन, धरान ।
सात वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा धरान उपमहानगर–६ का ६५ वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन् । पानबारीको रायचौरीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका रत्नबहादुर परियारले छिमेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
परदेशीका छोरी संरक्षकबाटै बलात्कृत
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,१८ फागुन, उदयपुर ।
उदयपुरकी सम्झनाको परिवारलाई आज खाए भोली के खाने भन्ने चिन्ता थियो । त्यसै समयमा उनका श्रीमानले रोजगारीका लागि विदेश जाने इच्छा गरे । त्यसका लागि पासपोेर्ट बनाए । प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । तर मेडिकल जाँच गर्दा छातीमा दाग देखियो । उनले विदेश जान पाएनन् र काठमाडौंबाट उदयपुर फर्किए ।
शैक्षिक भ्रमणमा गएका बालक स्वयम्भूबाट बेपत्ता
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१८ फागुन, ललितपुर ।
जिल्लाको भट्टेडाँडा आधारभूत विद्यालयको कक्षा ५ मा अध्ययरत एक विद्यार्थी हराएका छन् । शैक्षिक भ्रमणका लागि स्वयम्भूमा पुर्‍याइएका ११ वर्षीय बुद्धराज थिङ शुक्रबार अपराह्न करिब ४ बजे हराएका प्रिन्सिपल सीताराम चौधरीले जानकारी दिए ।
आठ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, अवस्था चिन्ताजनक
रातोपाटीमा प्रकाशित,१७ फागुन, पर्सा ।
पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर–५ निचुटामा आठ वर्षीया एक बालिकालाई तीन जना युवकले सामूहिक बालात्कार गरेका छन् । पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर–५ निचुटामा आठ वर्षीया एक बालिकालाई तीन जना युवकले सामूहिक बालात्कार गरेका छन् । निचुटाकै एक सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ मा अध्ययनरत बालिकालाई माछा दिने प्रलोभन दिएर तीन जना युवकले बलात्कार गरेका हुन् ।
उदयपुरमा एकै दिन दुई ठाउँमा आगलागी, एक बालिका घाइते
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,१७ फागुन, उदयपुर ।
उदयपुरको कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकामा आगलागी भएको छ । आगलागीमा परी कुमार पोखरेलकी ३ वर्षीया छोरी निर्जला पोखरेल घाइते भएकी छिन् ।
होली खेल्नेक्रममा छतबाट खसेर बालकको मृत्यु
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,१७ फागुन, पोखरा ।
होली खेल्नेक्रममा एकजना बालकको घरको छतबाट खसेर मृत्यु भएको छ। घरको छतबाट खस्दा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–२ विन्ध्यवासिनीका ११ वर्षिय आविश्कार रेग्मीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
अवैध सम्बन्धबाट शिशु जन्माएर फाल्ने महिलालाई ज्यान मुद्दा
थाहा खबरमा प्रकाशित,१६ फागुन, भोजपुर ।
गत फागुन ४ गते सालनाल सहितको शिशु फाल्ने महिलालाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। भोजपुरको उत्तरी षडानन्द नगरपालिका–६ केउरेनीपानीमा बेवारिसे अवस्थामा फ्यालिएकोे शिशु गीता मग्रातीले जन्माएर फालेको खुलेपछि मग्रातीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ।
कलिला काँधमा इँटाको भारी
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१६ फागुन, नेपालगन्ज ।
पढ्ने उमेरका बालबालिका विद्यालय जान छाडेर जोखिमपूर्ण श्रममा होमिएका छन् । नेपालगन्जमा सञ्चालित अधिकांश इँटा उद्योगमा बालबालिकालाई काममा लगाइएको छ । ८ देखि १५ वर्षसम्मका बाल मजदुरमध्ये केही भारतीय छन् ।
जीपको ठक्करबाट एक स्कुले बालकको मृत्यु
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,१६ फागुन, बैतडी ।
बैतडीको देहीमाण्डौंमा जीपले ठक्कर दिँदा एक बालकको ज्यान गएको छ। सतबाँझबाट गोठलापानीतर्फ गइरहेको से १ ज ३८९ नम्बरको जीपले ठक्कर दिँदा दशरथचन्द नगरपालिका २ देहीमाण्डौंका हर्कबहादुर बोहराका ७ वर्षीय छोरा विवेक बोहराको ज्यान गएको हो।
बलात्कारीलाई १४ वर्ष जेल
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,१६ फागुन, भोजपुर ।
जिल्ला अदालत भोजपुरले याकु र दुम्मानामा जबरजस्ती करणी गर्ने दुई जनालाई सजाय तोकेको छ। अदालतले आमचोक गाउँपालिका – ९ दुम्मानामा १५ वर्षिय वालिकाको बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गर्ने १८ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठलाई जबरजस्तीकरणी तर्फ १० वर्ष र अंगभंग गरेको तर्फ ४ वर्ष गरि १४ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।
चितुवाको आक्रमणबाट बैतडीमा बालक घाइते
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,१५ फागुन, बैतडी ।
बैतडीमा सोमबार राति नरभक्षी चितुवाले एक बालकलाई आक्रमण गरेको छ । आक्रमणमा परी मेलौली नगरपालिका–९, रोकटाका मानबहादुर चन्दका डेढ वर्षीय छोरा गणेशबहादुर चन्द गम्भीर घाइते भएका बैतडीका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
नेपालमा निमोनियाको प्रकोप बढी : यी हुन् बालबालिकामा देखिने शीर्ष १० रोग
रातोपाटीमा प्रकाशित,१५ फागुन, काठमाडौं ।
बालबालिकामा लाग्ने विभिन्न रोगहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा निमोनिया रहेको छ । बाल चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार पनि नेपालमा बालबालिका मुत्यु गराउने प्रमुख रोग निमोनिया नै हो ।
ट्याक्टरको ठक्करबाट ४ वर्षिय बालकको मृत्यु
सेतोपाटीमा प्रकाशित,१४ फागुन, म्याग्दी ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाँउपालिका ९ राम्चेमा ट्याक्टरको ठक्करबाट ४ वर्षिय बालकको मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ ग १ त २९३८ नम्बरको ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा स्थानीय शिव प्रसाद खोर्जाका छोरा सेमियलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,१४ फागुन, मोरङ ।
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा आइतबार बेलुका पानीमा डुबेर दुई वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। घर नजिकै रहेको खाल्डोमा डुबेर सुनवर्षी नगरपालिका–९ चन्द्रखाडी बस्ने फागुला शर्माका छोरा सुभाष शर्माको मृत्यु भएको हो।
बलात्कार आरोपमा थुना आदेश
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१४ फागुन, महोत्तरी ।
नाबालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक बृद्धलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुना आदेश गरेको छ । पिपरा गाउँपालिका-३ का ७५ वर्षीय कुमार पाण्डेलाई अदालतले थुनामा पठाएको हो ।
बालिकामाथि हातपात गरेको आरोपमा सेनाका हवल्दार पक्राउ
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,१३ फागुन, इलाम ।
इलाममा ५ वर्षीय बालिकलाई हातपात गरेको भन्दै नेपाल सेनाका हवल्दार पक्राउ परेका छन् । ड्यूटीमा रहेका बेला रक्सी खाएर बालिकामाथि हातपात गरेको भन्दै हवल्दार सुशिल पौड्याललाई इलाम नगरपालिका–७, बाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले जनाएको छ ।
भिरबाट लडेर बालकको मृत्यु
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,१३ फागुन, ताप्लेजुङ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–३ तिरिङ्गेमा एक बालकको लडेर मृत्यु भएको छ । वीरबहादुर इजमका १४ वर्षीय छोरा राजकुमार इजमको गाउँकै सयपत्री सामुदायिक वनमा लडेर मुत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।
सँगैका साथी स्कुल जान्छन्, मचाहिँ विधुवी भएँ
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित,१३ फागुन, बझाङ ।
कालो अक्षर नचिनेकै बेला ९ वर्षको उमेरमा छिमेकी गाउँका १२ वर्षीय केटासँग कल्पना बोहोराको मागी बिहा भयो। १४ वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तानकी आमा बनेकी उनी अहिले १८ वर्षकी हुँदा तेस्रो सन्तानकी आमा बनेकी छिन् ।
आगलागीमा १० महिने बालिकाको मृत्यु
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित,१२ फागुन, बाजुरा ।
सदरमुकाम बडिमालिका वडा नम्बर ८ थापावाडाको एक घरमा आगलागी हुँदा १० महिनाकी बालिकाको मृत्यु भएको छ । दिउँसो घरमा कोही नभएका बेला बडिमालिका नगरपालिका ८ का अके थापाको घरमा आगलागी भएको प्रहरीले बताएको छ ।
फेसबुकमार्फत् भएको चिनजान : १३ वर्षीया बालिकामाथि ब्ल्याकमेल र बलात्कार
१५ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ